Nayakhabar.com: बेलायती राजकुमारलाई पत्र : ह्यारी, सक्छौ भने मेरो देशको बेचिएका निर्दोष बालबालिका फर्काइदेऊ
बेलायती राजकुमारलाई पत्र : ह्यारी, सक्छौ भने मेरो देशको बेचिएका निर्दोष बालबालिका फर्काइदेऊ
प्रिय राजकुमार ह्यारी
मीठो सम्झना ।
कस्तो छ तिमीलाई ? आरामै छौ नि ? नेपालबाट गएपछि केही खबर छैन तिम्रो । यहाँ हुन्जेल त पत्रकारले छिनछिनमा तिम्राबारे अपडेट गराइरहन्थे । आशा छ, कुशल मंगल छौ । यहाँ मलाई पनि सन्चै छ, अहिलेसम्म । तर, तिम्रो सम्झना भने निकै आइरहन्छ । यत्तिका दिनसम्म मनका भावना फाट्टफुट्ट फेसबुक र ट्वीटरमा मात्रै व्यक्त गर्थें । तर, आज तिम्रो नाममा पत्र नलेखी बस्नै सकिनँ । अप्रिल फुल नै सही अस्ति एउटा अनलाइनले तिम्रो नामबाट पत्र छापेछ । तिम्रो नेपाल भ्रमण लम्बिनुका कारण प्रेम हो भनेर । त्यो पढेर तिमीप्रतिको मेरो माया झनै बढेर गएको छ । पत्रमा तिमीले नेपालकी कुनै छोरीलाई मन पराएको कुरा उल्लेख थियो । हुन त पत्रले तिम्रो व्यक्तिगत प्रेमबारे चर्चा गरेको थियो । तर, म तिमीले मेरो देशप्रति गरेको प्रेमबाट निकै प्रभावित छु ।
राजकुमार, साँच्चै भन्ने हो भने तिमीले भन्दा लाखौं गुणा बढी माया गर्छु नेपाललाई । तिमी आफैं भन न आफ्नो देशको माया कसलाई लाग्दैन होला र ? फरक यही हो कि तिमीले जसरी देखाउन सकिनँ, तिमी त दुई दिनको पाहुना बनेर आएका थियौ, गइहाल्यौ । तर, जति समय बस्यौ, एकदमै सराहनीय काम गरेर गयौ । पाँच दिनका लागि भनेर मेरो देश आएको तिमी फेरि ६ दिन समय थपेर बस्यौ । तिमी नेपाल हुँदै र तिमी गइसकेपछि पनि तिम्राबारे राम्रा–नराम्रा थुप्रै चर्चा चले । अनेकथरी कुरा भए । धेरैले तिम्रो कुरा काटे । सँगै तिम्रोबारे राम्रो कुरा गर्नेको पनि कमी थिएन । तिम्रो प्रशंसा गर्ने निकै थिए । धेरैले नेपालप्रति तिमीले देखाएको माया बनावटी भन्दै थिए । अनि तिमीले यहाँ आएर गरेका काम पनि देखाउनकै लागि मात्रै गरेको भनेर टिप्पणी गरे । मलाई विश्वास छ– तिमी यस्ता कुराबाट विचलित हुँदैनौ । मन दुखाउँदैनौं । मानिसको स्वभाव व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । अनि उनीहरूले अरूप्रति बनाउने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक हुन्छन् । कतिले त तिम्रो विगत कोट्याएर हाम्रै देशका पूर्वराजाका छोरासँग तुलना पनि गरे । खैर, जेसुकै होस् ज–जसले जे–जे भने पनि मैले भने तिम्रो नेपाल भ्रमण र यहाँको बसाइलाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छु । तिमीले गरेको नेपाल भ्रमण र यहाँ बसुन्जेल गरेका क्रियाकलापले विश्वमा नेपाललाई चिनाउन थोरै भए पनि टेवा पुग्योजस्तो मलाई लागेको छ ।
ह्यारी, राम्रा–नराम्रा कुरा जसको जीवनमा पनि हुन्छ । नराम्रा विगतलाई बिर्सिएर जब कोही मानिस राम्रो बाटोतिर लाग्छ भने हामीले विगत कोट्याएर बसिरहनु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन है । फेरि तिमी त हामीजस्तो सर्वसाधारण पनि परेनौ, अनि त तिम्राबारे चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । तिमीले खाएको, हिँडेको, बोलेको, लगाएको कपडादेखि जुत्तासम्मको चर्चा गर्न भ्याए नेपाली मिडियाले । तिम्राबारे यत्तिको चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो, किनकि तिमी राजकुमार हौ ।
प्रिय, नेपाल र नेपालीप्रतिको तिम्रो प्रेमले विश्वका थुप्रै मानिस चकित भए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेदेखि बेलायत नउडुन्जेलसम्मका तिम्रा हरेक क्रियाकलापलाई अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि फलो गर्ने कोसिस गरें । तिम्रो त्यो साधारण पहिरन, सबैलाई सम्मान गर्ने बानी, मीठो बोली, हाँसिरहने स्वभाव… यी सबैले तिमीप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गयो । नेता हुन् या नागरिक, राष्ट्रपति होस् या सर्वसाधारण सबैलाई एकैकिसिमले नमस्ते गर्दै हात मिलायौ । देशका सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने कुरा तिमीले नबोले पनि व्यवहारले प्रस्ट पारिदियौ ।
साँच्चै तिमी कति धेरै माया गर्छौ है, मेरो देशलाई ? तर, आफूले गरेका कामलाई मिडियामा ल्याउन नचाहने स्वभावले तिम्राबारे खासै धेरै कुरा थाहा पाउन सकिएन । अनि तिम्रो अचम्मको अर्को बानी के भने नि, पत्रकार देख्यो कि एलर्जी हुने । थाहा छ– तिम्रो त्यो बानीले गर्दा कति धेरै पत्रकार दाजुदिदीले दुःख पाए । थपेर बसेको ६ दिनमा त तिमीले आफ्नो फोटो खिच्न पनि दिएनछौ अनि समाचार नि नलेख्नु भनेछौ । कति दाजुहरू त तिमीलाई पछ्याउँदाको हैरान भएछन् । तिमी राजकुमार भएकाले तिम्राबारे धेरै मानिसले चासो राख्छन् । अनि पत्रकारले समाचार लेख्न पाएन भने त कसरी थाहा पाउँछन्, नागरिकले ? यो कुराको चाहिँ ख्याल गर्नुपथ्र्यो तिमीले होइन भन त ? तर, जेहोस् तिमीले समाचार नेलेख्नु भने पनि कसोकसो गरेर दाजुहरूले समाचारचाहिँ लेखिरहे । गोरखा जाँदा तिमीले बाटोमा मास्क किन्दै गरेको तस्बिर र स्कुल बनाउँदाको केही तस्बिर निकै चर्चित भए । अझ तिमीले डोकामा ढुंगा बोकेकाले त सारा नेपाल हल्लायो । त्यति सास्ती सहेर पनि तिम्राबारे ताजा अपडेट गराइरहने पत्रकार दाजुहरूलाई धन्यवाद नदिरहन कहाँ सक्छु र म ?
साँच्चै तिमी बालबालिकाको खुसी चाहन्छौ भने अनि नेपाल र नेपालीलाई हृदयदेखि नै माया गर्छौ भने कृपया ती अबोध बालबालिकालाई नेपाल फर्काउन सहयोग गरिदेऊ है । जतिसक्दो छिटो केही पहल गरेर तिमीले बेचिएका मेरा देशका ती बालबालिकालाई फर्काउन सहयोग गर्नेछौ भन्ने आशा लिएकी छु । बेलायतको राजकुमार भएको नाताले यदि तिमीले बेचिएका नेपाली बालबालिकालाई नेपाल फर्काउन कुनै पहल गरेनौ भने नेपाल र नेपालीप्रतिको तिम्रो माया बनावटी हो भन्नेकै जित हुनेछ ।
तिमीले घुमेको पाटन दरबार, हस्तकलाका सामान बनाउन गरेको अभ्यास, भक्तपुरको भूकम्प प्रभावित बस्ने क्याम्प, बर्दियामा जलयात्रा, घरबास र वन्यजन्तु अवलोकन । अनि लमजुङको गुरुङ बस्तीमा पुगेर गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएको कुरा । स्कुले छात्रछात्रासँग खेलेको भलिबल । एकाबिहानै सूर्योदयसँगै मनोरम हिमाली दृश्यलाई तिमीले आफ्नो मोबाइलमा कैद गरेको क्षण । लमजुङको गौँडा लेउरानीमा बास बसेर मंगली तामाङसँग खाएको बेलुकीको खाना झल्झली सम्झना आइरहेछ । होलीमा रंगीविरंगी रंगले रंगिदा तिमी कम्ता राम्रो देखिएको थिएनौ । सुन्दर नगरी पोखरामा ब्रिटिस क्याम्पको भ्रमण । त्यसपछि थपेको समयमा तिमीले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखामा गएर प्रभावितलाई गरेको सहयोग र श्रमदानलाई हामी नेपालीले सधैं सम्झिरहनेछौं ।
काठमाडौंको सोल्टी होटलमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग बालिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै बालिबालिकाको पक्षमा तिमीले बोलेका कुरालाई कहाँ बिर्सन सक्छु र । नेपालमा बालिकाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न अनेक अवरोध रहेको भन्दै तिमीले शिक्षाको माध्यमबाट यस्ता अवरोधसँग लड्न सुझाएका थियौ । तर, विडम्बना तिमीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा हुन भने पाएन ।
राजकुमार ह्यारी, पत्र लामो भयो भनेर झर्को त लागेको छैन नि ? झर्को नमान है ! मैले तिमीलाई यो पत्र कोर्नुको खास कारणचाहिँ भन्नै बाँकी छ । हेर तिमी नेपाल आयौ, घुम्यौ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर बालबालिकासँग कुरा ग¥यौ । उनीहरूको समस्या सुन्यौ, विद्यालय बनाउन सघायौ पनि । बालिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै बालबालिकाको पक्षमा बोल्यौ । तिम्रो स्पीच निकै राम्रो थियो ।
तर, हिजो भर्खरै मैले एउटा नराम्रो खबर सुनें । तिमीले अनुमान लगाइसक्यौ होला मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर । हो, विनाशकारी भूकम्पमा बाँचेका नेपाली बालबालिका बेचिएका छन् रे, तिम्रो देशमा । खबर सुनेर म निकै दुःखी भएँ । धेरैबेर रोएँ पनि । यो कुराले तिमी पक्कै खुसी छैनौ । हेर, दलालले नेपालीसँगै भारतको विहारका बालबालिकालाई पनि तिम्रो देशमा लगेर घरेलु कामदारका रूपमा बेच्दारहेछन् । तिम्रै देशबाट प्रकाशित पत्रिका ‘द सन’ मा यो खबर सार्वजनिक भएपछि विश्वभरि अहिले यसले चर्चा पाएको छ । यो समाचार सार्वजनिक भएपछि तिम्रो देशको प्रहरीले पनि घटनाको छानबिन गर्ने भएछ । बेलायती गृहमन्त्री थेरेसा मेले नेपाली र भारतीय बालबालिका गैरकानुनी रूपमा बेचिने गरेको दाबीबारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका रहेछन् ।
दलालले नेपाल र भारतका १० वर्षमुनिका बालबालिका प्रतिबालबालिका पाँच लाख भारतीय रुपैयाँमा बेच्छन् रे । अनि तिम्रा देशका धनाढ्यले ती बालबालिकालाई नोकर बनाउँछन् भन्ने कुरा समाचारमा आएको छ । बालबालिकालाई बिक्री गर्ने गिरोहको नाइके मख्खन सिंह नाम गरेको भारतीय रहेछन् । नेपाली बालबालिका दासका रूपमा बेलायत पुर्याएको खबरले म मर्माहत भएकी छु ।
तिमीसँग प्रत्यक्ष रूपमा नभेटे, नबोले पनि मलाई विश्वास छ कि यो घटनाबारे अनुसन्धान गरी मेरो देशका बालबालिका नेपाल फर्काउन तिमीले सहयोग गर्नेछौ । तिमीले अस्तिको भ्रमणमा भनेका थियौ, ‘म नेपाली बालबालिकाको खुसी चाहन्छु ।’ साँच्चै तिमी बालबालिकाको खुसी चाहन्छौ भने अनि नेपाल र नेपालीलाई हृदयदेखि नै माया गर्छौ भने कृपया ती अबोध बालबालिकालाई नेपाल फर्काउन सहयोग गरिदेऊ है । जतिसक्दो छिटो केही पहल गरेर तिमीले बेचिएका मेरा देशका ती बालबालिकालाई फर्काउन सहयोग गर्नेछौ भन्ने आशा लिएकी छु । बेलायतको राजकुमार भएको नाताले यदि तिमीले बेचिएका नेपाली बालबालिकालाई नेपाल फर्काउन कुनै पहल गरेनौ भने नेपाल र नेपालीप्रतिको तिम्रो माया बनावटी हो भन्नेकै जित हुनेछ । त्यसैले ह्यारी तिमीले चाँडै कुनै कदम चालिहाल, यो विषयमा । छिट्टै सकारात्मक समाचार सुन्न पाऊँ । बेचिएका बालबालिका नेपाल फर्र्कदै छन् भन्ने खबर सुन्न आतुर छु । म त्यही सुखद खबरको प्रतिक्षामा छु कि तिम्रो पहलमा मेरो देशका बच्चा चाँडै स्वदेश फर्किऊन् । मलाई निराश त बनाउँदैनौ नि है ?
राजकुमार, तिमी हृदयदेखि नै नेपाल र नेपालीलाई साँचो माया गर्छौ भने फेरि पनि समय मिलाएर नेपाल घुम्न आऊ है । अनि तिमी जुन देश जान्छौ, त्यहाँ नेपालबारे थोरै कुरा राखिदेऊ, नेपाल घुम्न जानू भनिदेऊ । र ती अबोध बालबालिकाबारे एकपटक गम्भीर भएर सोच है । तिनीहरूलाई चाँडै नेपाल फर्काउन पहल गरिदेऊ । तिम्रो नाममा पत्र कोर्दै गरौंला । यो पत्र पाएपछि जवाफ लेख्न भने नबिर्स है । म तिम्रो पत्रको प्रतीक्षामा बस्नेछु ।
उही तिम्री सखी/हिमालकी छोरी
सात समुद्रपारिको देश नेपालबाट ।
- See more at: http://www.ratopati.com/photo-news/41945/#sthash.ljaGbcHB.ZWFUwEHI.dpuf